४० वर्षको उमेरमा कसरी देखिने २५ वर्षको जस्तो ? अपनाउनुहोस् यस्ता टिप्स « Sansar News
४० वर्षको उमेरमा कसरी देखिने २५ वर्षको जस्तो ? अपनाउनुहोस् यस्ता टिप्स
२९ पुष २०७८, बिहीबार १३:२९
काठमाडौं । अक्सर बढ्दो उमेर र गलत जीवनशैलीका कारण शरीरमा धेरै परिवर्तनहरु देखिने गर्दछ । यसको एउटा कारण शारीरिक कमजोरी पनि हो, जसका कारण आजकाल अधिकांश पुरुषहरु समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा घरेलु उपाय अपनाएर भने यस समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिने प्रमाणित भएको छ ।
आजको तिब्र गतिको जीवनमा खराब जीवनशैली र गलत खानपानका कारण धेरै पुरुष रोगको सिकार भइरहेका छन् । बढ्दो शारीरिक कमजोरीले पुरुषलाई चिन्ताको विषय बनाउँछ। जसका कारण धेरै पुरुषले औषधिको सहारा पनि लिन्छन् तर फाइदा हुनुको साटो घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।
पुरुषमा भएको कमजोरीले उनीहरुको रोमान्टिक जीवनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा, कुनै पनि चीज प्रयोग गर्नु अघि, कृपया डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस्। यसबाहेक, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, यी घरेलु उपायहरूको मद्दतले तपाइँ यस समस्याबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
दूध, खजुर र माखनाको सेवन अमृत समान
क्याल्सियम, फाइबर, जिंक, म्याग्नेसियम र आइरनले भरपूर खजूरको सेवन गरेर पुरुषहरूले आफ्नो स्ट्यामिना बढाउन सक्छन्। शारीरिक रुपमा कमजोर र दुब्लो मानिसहरुका लागि खजूर वरदानभन्दा कम छैन । यसका साथै दैनिक सुक्खा खजूरको सेवन गर्दा पाचन क्रिया पनि राम्रो हुन्छ । खजूरको उत्कृष्ट नतिजाको लागि दूधमा खजुर मिसाएर पिउनुहोस्।
पुरुषका लागि माखना निकै लाभदायक मानिन्छ । यो एक आयुर्वेदिक जडीबुटी जस्तै हो । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल्स, फ्याट, फस्फोरसजस्ता पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण माखना पुरुषलाई स्वस्थ राख्नका लागि प्रभावकारी हुन्छ । दैनिक माखनाको सेवनले शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादन बढाउँछ, जसले पुरुषको शरीरमा हुने शारीरिक कमजोरीलाई धेरै हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्छ। माखनामा क्यालोरी धेरै कम हुन्छ र फाइबर राम्रो मात्रामा पाइन्छ, जसका कारण शरीरलाई प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम प्राप्त हुन्छ। यसको सेवनले शरीरलाई धेरै स्वास्थ्य लाभ हुन्छ । माखनाको नियमित सेवनले शरीरको कमजोरी हटाउँछ ।
पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण दूध पुरुषका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । दैनिक दूध पिउनाले स्ट्यामिना बढ्छ । नियमित दुधको सेवनले पुरुषले आफ्नो स्ट्यामिना बढाउन सक्छन् । जसका कारण शरीरलाई धेरै उर्जा पनि प्राप्त हुन्छ ।
कुन खाना कसरी खाने ?
खजूर र माखनालाई कम्तिमा २ देखि ३ घण्टासम्म पानीमा भिजाउने । त्यसपछि एक गिलास दूध लिनुहोस् र ग्राइन्डरमा राख्नुहोस्। अब यसमा खजूर र माखना राख्नुहोस्। ६ मिनेटको लागि ग्राइन्डर चलाउनुहोस् र राम्रो पेय तयार गर्नुहोस्। यसको दैनिक उपभोग गर्नाले यसको परिणाम छिट्टै देख्न सकिन्छ। यसबाहेक दूधमा मह मिसाएर सेवन गर्दा स्ट्यामिना बढ्छ ।